Yemagariro Midhiya Certification uye Kudzidziswa
Kwemakore anopfuura gumi, ndanga ndiri mushandisi wemagetsi uye mumiriri we Agorapulse. Iwe unogona kudzvanya uchienda kuchinyorwa chakazara, asi ini ndinongodzokorora kuti ndiyo yakapusa social media management chikuva pamusika. Agorapulse inosanganiswa ne Twitter, Facebook, Facebook Mapeji, Instagram, uye kunyangwe Youtube.
Iyo kambani inoshamisa, zvakare, ichipa kungogara kuyerera kwetipipi, marongero, uye zvinowedzera kubvira payakatanga. Chimwe chinhu chinonakidza icho Agorapulse anacho chikoro chavo uko kwavanokupa kosi yesitifiketi iyo inosanganisira kushambadzira munharaunda, manejimendi manejimendi manejimendi, kuterera midhiya yenhau, uye kutaurwa kwenhau.
Yemagariro Media Dzidzo uye Kudzidziswa
Agorapulse Chikoro yakanakira vekutengesa nyanzvi avo vatsva kune vezvenhau kana vanoda kuwedzera ruzivo rwavo ruripo neup-to-date courseware. Kupfuura zvese, iyo academy iri Ipfupi (ndiro zita remadunhurirwa) iro rinobatanidza chikuva nemazano ayo kambani yako kana vashandi vanofanirwa kubudirira.
Iyo kosi inosanganisa mavhidhiyo nevatungamiriri vemaindasitiri, zvinyorwa zvechidzidzo, uyezve zvinokufambisa kuburikidza nekushandisa kwehunyanzvi kana zano mukati meiyo Agorapulse chikuva. Heano maganhuro:
Zvekushambadzira Zvemagariro Zvishandiso - chitsauko ichi chinosanganisira kutsikisa kune imwe kana mamwe ma profiles, kuronga uye kugadzirisa zvakarongedzwa zvinyorwa, kuvaka tsika kutsikisa mapoka, kumisa mitsara nekutarisa mitsara yakamiswa, kurodha zvirimo zvakawanda, kufambidzana kwechikwata, makarenda akagovaniswa, kushandisa zvinyorwa zvekuzivisa, uye kushandisa mobile application uye chrome kuwedzera .
Kugadzirisa Kutaurirana Kwemagariro - iro rezvenhau rezvemagariro, kuunganidza zvinyorwa zveshambadziro, kutora matanho nemasefa, kupindura uye kuongorora, kuchengetedza mhinduro, kunyora mazita, kubhukimaka, kuvanza, nekupa mhinduro, uchishandisa mubatsiri webhokisi, nevashandisi vekunyorera.
Zvemagariro Midhiya Kuzivisa - kutarisa mishumo, kutumira kunze mishumo, kushanda nemazita, uye kuvaka magetsi mushumo.
Zvemagariro Midhiya Kuteerera - kuteerera nevezvenhau network (kunze kweFacebook neLinkedIn iyo isingazvibvumidze), kuongorora uye kugadzirisa mafungiro, neprofile kutaurwa kwako, nemataurirwo asina basa, kana kiyi, ne URL, pamwe nekugadzirisa mhedzisiro yako yekuteerera.
Chimwe nechimwe chezvitsauko chinopera mumibvunzo yekudzidzira (iyo isingakanganise bvunzo yako yesitifiketi) asi inokupa iwe ruzivo iwe rwaungade kutora zvakare. Kune zvekare zvakakurudzirwa zviitiko kuti iwe upinde muakaunti yako yeAgorapulse kuti utore.
Ichi chitupa bvunzo dzinoedza ruzivo rwako rwezvakakosha zvinhu zve evanhu vezvenhau Marketing kuti vese vezvemagariro venhau vazive. Kupasa bvunzo iyi uye kuwana chako chitupa kunokutendera kuti uratidze hunyanzvi hwako uye hunyanzvi mune zvemagariro midhiya uye zvomenemene uve murapi neAgorapulse.
Ndatora kosi nhasi uye Ndiri (zviri pamutemo) nyanzvi yeAgorapulse!
Saina Izvozvi izvozvi kuAgorapulse Academy
Kuzivisa: Ini ndiri Mumiriri weAgorapulse uye Mubatanidzwa.
Tags: kutaura kuti ichokwadipasocial media certificationsocial media makirasisocial media kosisocial media dzidzo
Inguva yekusimudza Yako RSS Kudya Kubva kune Vakafa
Gumiguru 25, 2011 pa 5:46 AM